Haydarpaşaရထားဘူတာ၏သမိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးဇာတ်လမ်းနှင့် Haydar Baba သင်္ချိုင်း | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Haydarpaşaရထားဘူတာ၏သမိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးဇာတ်လမ်းနှင့် Haydar Baba သင်္ချိုင်း
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, PHOTOS, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
haydarpasa ဘူတာရုံသမိုင်းဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးဇာတ်လမ်းနှင့် Haydar Baba Turbesi
Haydarpaşaမီးရထားဘူတာကို 1906 II တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို Abdulhamid လက်ထက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး 1908 တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်ခဲ့သောဘူတာရုံသည် III တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို Seldar ၏ pashas တစ်ခုဖြစ်သော Haydar Pasha မှအမည်ပေးထားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားလမ်း၏အစအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်။ အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏နောက်ဆုံးကာလတွင်ဟစ်ကဇ်မီးရထားလမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထားအဓိကဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသွားအပြန်လိုင်းများနှင့်လည်းအရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Haydarpaşaဘူတာတည်ဆောက်ခြင်း၊ 30 မေလ 1906 ဒုတိယနှစ်။ Abdulhamid ကာလစတင်ခဲ့သည်။ 1906 တွင်ဘူတာရုံတည်ဆောက်ခြင်း၊ 19 ကိုသြဂုတ်လ 1908 တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဝန်ဆောင်မှုအတွက်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Andarolu Bağdatဟုခေါ်သောဂျာမန်ကုမ္ပဏီမှဆောက်လုပ်ခဲ့သောHaydarpaşaမီးရထားဘူတာသည်ကုန်သွယ်ရေးကုန်ပစ္စည်းများ၏ Anatolia မှ Anatolia သို့သွားသောသို့မဟုတ် Anatolia သို့သွားသောကုန်ချလုပ်ငန်းများအတွက်ဆောက်လုပ်သည်။
စီမံကိန်းကို Helmuth Cuno နှင့် Otto Ritter တို့ကစတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်အတွင်းအီတလီနှင့်ဂျာမန်ကျောက်သားများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 1917 မီးလောင်မှုကြောင့်ဘူတာရုံ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျက်စီးခဲ့သည်။ ဒီပျက်စီးမှုပြီးနောက်, က၎င်း၏လက်ရှိပုံသဏ္toာန်ပြန်ထားခဲ့သည်။ 1979 တွင်၊ လေပူ၏သက်ရောက်မှုသည်Haydarpaşaရှိကမ်းလွန်ရေနံတင်သင်္ဘောမှပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခဲစွန်းဖန်များပျက်စီးစေခဲ့သည်။ 28 နို ၀ င်ဘာလ 2010 တွင်၊ Haydarpaşaမီးရထားဘူတာ၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်မီးကြီးကြီးကြောင့်ဘူတာရုံ၏ခေါင်မိုးပြိုလဲခြင်းနှင့်အဆောက်အ ဦး ၏စတုတ္ထအထပ်သည်အသုံးမဝင်တော့ပါ။
လူအများစုအစ္စတန်ဘူလ်သို့သွားပြီးခမ်းနားထည်ဝါသောရှုခင်းကိုတွေ့နိုင်သောနေရာသည်ဂျာမန်ဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး ကိုငှက်ကြည့်ရှုသည့်အနေဖြင့်ခြေတစ်ဖက်သည်ရှည်လျားပြီးနောက်တစ် ဦး မှာမူတိုတောင်းသော“ U” ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်း၌ဤတိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောခြေထောက်များတွင်မျက်နှာကျက်များနှင့်မြင့်မားသောအခန်းများရှိသည်။
အခန်းများတည်ရှိရာ "U" ပုံသဏ္corာန်စင်္ကြံ၏နှစ်ဖက်စလုံးသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အတွင်းနေရာသည်အတွင်းရင်ပြင်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး သည် 21 သစ်သားလိပ်ခေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီးတစ်ခုစီသည် 100 မီတာရှည်သည်။ ဤလိပ်ခေါင်းများသည် 1900 နှစ်များအစောပိုင်းဖြစ်သောရေနွေးငွေ့တူရိယာ၏နည်းပညာကြောင့်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ အဆောက်အ ဦး ၏အဓိကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ထိုလိပ်ခေါင်းပေါ်ရှိပုံပုံဇယားကွက်ပေါ်တွင်ရှိသည်။
ဘူတာရုံအဆောက်အအုံသည်အလွန်ကြံ့ခိုင်ပြီးပြင်းထန်သောမြေငလျင်၌ပင်ပျက်စီးမှုနည်းပါးသည်။ အဆောက်အ ဦး ၏ခေါင်မိုးသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး 'မတ်စောက်သောခေါင်မိုး' ဖြစ်ပြီးဂျာမန်ဗိသုကာဗိသုကာများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Haydarpaşaရထားဘူတာ၏သမိုင်းတွင်မှတ်သားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းကံဆိုးစွာဖြင့်အမှတ်ရစရာများထဲမှတစ်ခုမှာ6September ဖြစ်သည်။ 1917 ရှိဗြိတိသျှသူလျှိုမှစီစဉ်သောဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ Garda ကိုစောင့်နေသောလှည်းများသို့ရိန်းဖြင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များကိုတင်ဆောင်စဉ်ဗြိတိသျှသူလျှိုဖျက်ဆီးခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အဆိုပါခဲယမ်းမီးကျောက်များအဆောက်အ ဦး ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရထားထဲမှာပေါက်ကွဲခဲ့ဘူတာရုံမှာစောင့်ဆိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဝင်ကြဖို့အကြောင်းကိုနှင့်မကြုံစဖူးမီးစတင်ခဲ့သည်။ ရထားရှိရာနှင့်ချီသောစစ်သားများသည်ဤပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးလောင်မှုများကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးမှုများခံစားခဲ့ရသည်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များကြောင့်ကာဒီကီနှင့်စီလီမီယာရှိအိမ်ပြတင်းပေါက်များပြိုပျက်သွားသည်ဟုပင်ဆိုထားသည်။
15 နို ၀ င်ဘာ 1979 တွင်ရိုမေးနီးယားလောင်စာဆီတင်သင်္ဘော“ Independanta” သည်ဘူတာရုံနားတွင်ပေါက်ကွဲပြီးအဆောက်အအုံ၏ပြတင်းပေါက်များနှင့်သမိုင်းဝင်ဆေးဆိုးဖန်များပြိုကွဲသွားသည်။
28.11.2010 နာရီအတွင်း 15.30 ရေပြင်ပေါ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည်သမိုင်းဝင်Haydarpaşaရထားဘူတာ၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဘူတာရုံ၏ခေါင်မိုးပေါ်ရှိမီးအားလုံးလုံးပျက်စီးစေခဲ့သည်။ 1 ကိုနာရီပိုင်းအတွင်းမှာထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးမီးအပြည့်အဝကိုမီးငြိမ်းသတ်လိုက်ပြီးခေါင်မိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ 30 1906 တွင်စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောဤခမ်းနားထည်ဝါသောအဆောက်အအုံကိုဂျာမန်ဗိသုကာနှစ် ဦး ကျန်ခဲ့သည်။ Haydarpaşaမီးရထားဘူတာရုံကို 500 တွင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအီတလီနိုင်ငံ 1908 ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ မေလ 1908 မေလ 19 မေလတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောဤခမ်းနားထည်ဝါသောပန်းရောင်ကျောက်ကျောက်ကျောက်များကို Hereke မှယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Selimiye Barracks ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သူ Haydar Pasha ၏အမည်ကို၎င်းသည်အမည်ပေးခဲ့သည်။ Sultan III ။ Seldar က Haydar Pasha ကို Haydar Pasha ကိုအမူအရာတစ်ခုအဖြစ်ခေါ်ခြင်းသည်သင့်တော်သည်ဟုယူဆပြီးသူ၏အမည်ပါစစ်တန်းလျားများဆောက်လုပ်ရာ၌တတ်နိုင်သလောက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မီးရထားလမ်းကွန်ယက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အာနတ်တိုလီယာ၏အတွင်းပိုင်းဒေသများသို့တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဘူတာရုံ၏အရေးပါမှုမှာတိုးများလာခဲ့သည်။ ဒီကနေထွက်ခွာအကောင်းဆုံးလူသိများ Express ပါ၏ East Express၊ Fatih Express၊ Capital Express၊ Kurtalan Express ။
Haydarpaşaမီးရထားဘူတာတွင်ထူးခြားသည့်ဗိသုကာတစ်ခုရှိပြီးတူရကီရုပ်ရှင်အများအပြားတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသူများ၊ နိဂုံးများစွာနှင့်ကွဲလွဲမှုများစွာကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီး၊ အဆောက်အ ဦး သည်ဂန္ထဝင်ဂျာမန်ဗိသုကာလက်ရာများကိုဥပမာ ပေး၍ မျက်လုံးတစ်ဖက်သည်ခြေတစ်ချောင်းတို၊ ထို့ကြောင့်အဆောက်အ ဦး တွင်ကြီးမားသောနှင့်အမြင့်ဆုံးမျက်နှာကျက်များရှိသည်။ ဒီပုံကHaydarpaşa၏ဘုန်းအသရေအချို့ကိုရှင်းပြသည်။ အရင်တုန်းကလက်မှုပန်းထိုးတဲ့ပန်းချီကားတွေနဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကဒီမျက်နှာကျက်တွေကိုတန်ဆာဆင်ခဲ့တယ်၊ အခုလက်လက်ပန်းထိုးတာကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်။ အဆောက်အဦးများ, ၎င်းသည် 21 သစ်သားလိပ်ခေါင်းတစ်ထောင်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီးတစ်ခုစီသည် 100 မီတာရှည်သည်။ Lefke-Osmaneli ကျောက်တုံးမျက်နှာဖုံးကိုမြေညီထပ်နှင့်အဆောက်အ ဦး ၏ mezzanine ကြမ်းပြင်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘူတာရုံ၏ပြတင်းပေါက်များသည်သစ်သားနှင့်စတုဂံပုံသဏ္builtာန်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးပြတင်းပေါက်များအကြားစတုဂံပုံသဏ္ဌာန်အတိုင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူနေသောအဆောက်အအုံ၏ဘေးနှစ်ဖက်တွင်အောက်ခြေနှစ်ဖက်စလုံးနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အတွက်အောက်ခြေမှခေါင်မိုးအထိကျဉ်းမြောင်းသောမျှော်စင်များရှိသည်။
Haydarpaşaမီးရထားဘူတာရုံရှိ6စက်တင်ဘာ 1917 နှင့် 15 နိုဝင်ဘာ 1979 သည်ယခင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်းဖြင့်လတ်တလောပုံစံကိုယူခြင်းအားဖြင့်ရိုးရိုးပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးလောင်မှုနှစ်ခုပြီးနောက်မီးရထားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုကိုင်တွယ်သောရီပတ်ဘလီကန်အစိုးရမှပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စ၍ 1908 သည်အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်ရှိရေနွေးငွေ့များ၊ အဆင်တန်ဆာများနှင့်အနုပညာလက်ရာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအလုပ်ကြောင့်မိုးရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းလမ်းများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ 1976 သည်အဆောက်အအုံအားထပ်မံပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အဓိကပြန်လည်ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Haydar Baba Mausoleum သည်ဂူဒါရာတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးHaydarpaşaရထားဘူတာရှိရထားများကြားတွင်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူထားသောသင်္ချိုင်းဂူနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ သင်္ချိုင်းဂူတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ Haydar Baba ၏သင်္ချိုင်းဂူနှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။ ဘူတာရုံကိုတပ်ဆင်ပြီးမကြာမီတွင်၊ 100 သည်ရထားလမ်းကိုဖြတ်သန်း။ ရထားဘူတာ၏လှုပ်ရှားမှုအကြီးအကဲတည်ရှိရာအဖွဲ့နှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်လိုသည်။ ပုံပြင်များအရ; ဘူတာရုံ၏အမည်ကိုကြီးကြပ်သူ၏အိပ်မက်အားပေးခဲ့သောဟေးဒါပရှာသည်ညတွင် ၀ င်ရောက်သည်။ ငါ့ကိုမနှောင့်ယှက်ပါနဲ့၊ သူကသူ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးကိုပြောတယ်။ ရွေ့လျားမှုကြီးကြပ်သူသည်မည်သည့်အိပ်မက်ကိုမဆိုအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်။ Haydar Pasha သည်သူ၏အိပ်မက်၌သူ၏လည်ချောင်းကိုညှစ်။ ထပ်တူထပ်ပြောပြန်သည်။ ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအိပ်မက်ကြောင့်ထိခိုက်လှုပ်ရှားမှုကြီးကြပ်ရေးမှူးသည်အလုပ်ကိုရပ်လိုက်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်ရထားလမ်းသည်သင်္ချိုင်းဂူကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် Haydar Baba Tomb ကိုရထားလမ်းကိုနှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ ယနေ့တိုင်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောလှပသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရစက်ပြင်နှင့်ရထားဝန်ထမ်းများအားလုံးသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရပ်တန့်ပြီးသူတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံသောခရီးအတွက်ဆုတောင်းကြသည်ဟုဆိုကြသည်။
Haydarpasa မီးရထားဘူတာခါးသီးသောပုံပြင်! .. 06 / 02 / 2012 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2012 ၏Haydarpaşaဘူတာတွင်လုပ်ဆောင်မှုများကို2နှစ်များအတွက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ လူတွေဟာသူတို့မှတ်ဥာဏ်ကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ဒီဘူတာရုံအဆောက်အအုံဟာငါတို့လူတွေအားလုံးရဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ YHT ကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ...
Heydar သူဟာအာကာ, Adapazarı-ဒေသဆိုင်ရာ Haydarpasa မီးရထားလိုင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့သည် 26 / 12 / 2016 Haydar Akar, Adapazarı-Haydarpaşaဒေသရထားလိုင်းကိုရှုံးနိမ့်သွားသည်။ CHP Kocaeli လက်ထောက် Haydar Akar သည် TGNA တွင်စက်မှုဇုန်ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေစဉ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအရAdapazarı-Haydarpaşaဒေသရထားလိုင်း ...
ဂျာမန်ရေပန်းပန်းပု Taurus ၏သမိုင်း၏ဇာတ်လမ်း 10 / 03 / 2014 ဂျာမန်သမိုင်းဝင်ဂျာမန်စမ်းရေတွင်းနှင့်နွားရုပ်ထု၏ပုံပြင် - ဆူလတန်ဟတ်ရင်ပြင်ရှိ 'ဂျာမန်စမ်းရေတွင်း' နှင့်ကာဒီကေို၏သင်္ကေတများမှတစ်ခုဖြစ်သော "ရုပ်ထုရုပ်ထု" ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သူတို့၏ကံကြမ္မာအပေါ်ထင်မြင်ချက်များကွဲပြားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ ဂျာမန် Fountain Osmanlıဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
အပျက်အယွင်းအတွက်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများအတွက် Haydarpasa မီးရထားဘူတာ 29 / 09 / 2017 Hayrdarpaşaမီးရထားဘူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ သို့သော် 10 သည်ဤမြေယာရှိမှတ်ပုံတင်ထားသောသမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများအတွက်မူထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရရထားလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်…
Haydarpaşaမီးရထားဘူတာ၏သမိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပုံပြင်နှင့် Haydar Baba သင်္ချိုင်း - မီးရထားစနစ်
Haydarpasa မီးရထားဘူတာခါးသီးသောပုံပြင်! ..
Heydar သူဟာအာကာ, Adapazarı-ဒေသဆိုင်ရာ Haydarpasa မီးရထားလိုင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်
ဂျာမန်ရေပန်းပန်းပု Taurus ၏သမိုင်း၏ဇာတ်လမ်း
အပျက်အယွင်းအတွက်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများအတွက် Haydarpasa မီးရထားဘူတာ
Kadikoy - Kartal Metro စီမံကိန်းAyrılıkçeşmeဘူတာ Heydar ဆောက်လုပ်ရေး Sezen ၏ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ
Haydar Pasha ၏အိမ်တော်
Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, အHaydarpaşaရထားဘူတာလှုပ်ရှားမှုတပ်ဦး၏ xnumx.hafta ခဲ့သည်
ဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်ရဲ့ခမည်းတော်၏Handüzဇန်နဝါရီလGüneysuကုန်းပြင်မြင့် cable ကိုကားတစ်စီးစီစဉ်နေသည် Making
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဖေဖော်ဝါရီလ 19 1847 ဗီယင်နာသံအမတ်ကြီး Sadik တော်လ်ရီဖက် Pasha, port ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဆိုပါရထားလမ်းစျေးကွက်မှထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏သင့်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းတရားတွေ့တော်မူ၏စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးကို။
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (227) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)